श्रीलङ्कामा फेरी कर्फ्यूको लाग्यो -
श्रीलङ्कामा फेरी कर्फ्यूको लाग्यो
३० बैशाख २०७६, सोमबार १७:३९ 143 ??? ???????
कोलम्बो-श्रीलङ्काको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको कुरूनेगाला जिल्लामा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय र बहुसङ्ख्यक बुद्धमार्गी समूहबीच झडप भएपछि राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेले एक विज्ञप्ति जारी गरी सवै समुदायलाई सम्यमित बन्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा गलत तथा भ्रामक सूचनाबाट प्रभावित नबन्न र शान्त रहन आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने,, “सरकार तथा सुरक्षा निकायले नागरिकको सुरक्षाका लागि निरन्तर खटिरहेको छ तर पनि हरबखत हिंसाका घटना देखिइरहेका छन् । यसको अनुसन्धान गरी नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ ।”
सरकारले गलत सूचना सम्प्रेषण नहोस् भनी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा सोमबार विहानैदेखि अनिश्चित समयका लागि बन्द गरेको छ । (सिन्ह्वा
विद्यालय हाताभित्रै गोली प्रहार, दुई विद्यार्थीको मृत्यु